आँखै अगाडी चितु*वाले छोरालाई झम्ट्यो, आमाले केहि गर्न सकिनन्, छोरा ममी भन्दै, आमा खुट्टा तान्दै ! घटनास्थलमा यस्तो देखियो - Complete Nepali News Portal
आँखै अगाडी चितु*वाले छोरालाई झम्ट्यो, आमाले केहि गर्न सकिनन्, छोरा ममी भन्दै, आमा खुट्टा तान्दै ! घटनास्थलमा यस्तो देखियो
ScotNepal January 29, 2020
तनहुँ जिल्ला बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं ४ का इसाक सुनारलाई सोमबार भोज खाएर घर फर्किर्दै गर्दा बाघले आक्रमण गर्यो र ज्यान लियो । आमा र दाजुहरुसंग हात समाएर आउँदै गर्दै घर नजिकै बाटोमा इसाकलाई बाघले आक्रमण गरेको उनकी आमाले बताईन् । चितुवा भनिदै आए पनि यो बाघ जस्तै ठूलो रहेको र आफ्नै हातबाट माईलो छोरा इसाक सुनारलाई घिसार्दै लगेको उनले बताएकी छन् ।
आज करीब साँझ ६ बजेतिर गाउँमा भएको छेवरको भोज खाएर घर फर्कने क्रममा आमासँगै रहेका छोरा इशानलाई बाटैबाट चितु*वाले झम्टेर लगेको हो । घटनास्थलबाट करीब ८० मिटर तल मृत अवस्थामा फेला पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय डुम्रेले जनाएको छ ।
केही समयअघि पनि आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ रानागाउँमा एक बालकको मृत्यु भएको थियो । तनहुँको भानु नगरपालिकामा, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, ब्यास नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्र, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा चितुवाले आतङ्क मच्चाएपछि तनहुँवासीमा त्रास छाएको छ ।
कसरी दिउँसै आमाको हातबाट चितु*वाले बालक खोसेर लग्यो ? यो स्थलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस् ।
हेर्नुहोस् असोज ४ गते आईतबारको राशिफल
गुल्मीकी चर्चित कलाकार दिसान्ती परिवारको नयाँ
दोहोरी खेलेर भाइरल १४ बर्षिय कमला
बिहे गर्छु भन्दै संग रात बिताएर
दशैको गित मात्र नभएर गरिब दुखिलाई
गीत गाउदागाउदै लब परेपछि केहि नह्रेइ
आज पनि प्रहरीसंग डर,’लाग्दो झ,’डप र
आज पनि पुण्य गौतमले खुट्टा भाचिने
महिलाको घाँटीबाट निकालियो ४ फिटको सर्प
ट्रम्पले “राष्ट्रमा सबैभन्दा खराब” बाल्टिमोरलाई फेरि अपमान गर्दै भने
शरीरका सबै अंगमा ट्याटु, बाटोमा हिड्दा सबै चकित पर्दै हेर्छन...
विश्वका दुर्लभ गोरिल्लाहरू नाइजेरियाको जंगलमा बच्चाहरूसँग भेटिए!!!
पुण्य गौतमको कमेडीले पत्रकारनै ढले, कपिल शर्मालाई ठाडै च्यालेन्ज गरेपछि...
रबिलामिछाने ले देखाए नेपालकै सुन्दरता बोकेको एउटा लोभ लाग्दो दृश्य...